घरमा कुकुर छैन, सुगुँर छ, सुगुँरको पुजा गर्नुभयो? | नेपाली पब्लिक घरमा कुकुर छैन, सुगुँर छ, सुगुँरको पुजा गर्नुभयो? | नेपाली पब्लिक
होमपेज / धर्म/संस्कार | विचार | समाज |
घरमा कुकुर छैन, सुगुँर छ, सुगुँरको पुजा गर्नुभयो?
किरण खनाल २०७६, १४ कार्तिक बिहीबार ११:३५
सबैभन्दा पहिले हामि सबैले तिहार आफ्नो गच्छे, अवस्था र मन अनुसार मनाइयो भन्ने आशा छ।
सबैका आफ्ना बिचार, गराई, भोगाई, चाड मनाउने तरिका र तिहारबिशेषको लेखाई भएकोले सबै चेलीहरुलाई सम्मान प्रकट गर्छु। चाड आफ्नो इच्छाअनुसार मनाउन पाइन्छ। यो लेखका कारण भिन्न तरिकाले चाड मनाउनेहरुको मन दुखोस भन्ने चाहना होइन।
तर भाईटिकाको दिन सामाजिक संजालमा देखिएका केहि तस्विर जसमा धेरै लाईक आएको थियो। अनि सबैले कमेन्टमा वाओ भनेका छन्। त्यहि तस्विरको सन्दर्भमा यो सानो टिप्पणीः
भाईटिकाको दिन केहि तस्विरहरु चर्चामा रहे। एउटै कोखबाट जन्मीएका दाजुभाई नहुनेले दिदिबहिनी एक आपसमा भाईटिका लगाएको तस्विरको खुबै प्रशंशा भयो। अर्को एउटा तस्विरमा त दुईमध्ये एक बहिनी दौरा सुरुवालमा नै सजिएकी देखिईन।
यहाँ कसले कस्तो तरिकाले चाड मनायो भन्ने कुरा गर्न खोजिएको होइन, तर मनाउनेहरु प्रायः समाजका बेतिथिहरु अन्त्य गर्दै सुसंस्कृत समाज निर्माणमा लागेका अभियन्ताहरु नै थिए जस्तो लाग्यो। किनभने उनीहरुमा केहि नयाँ गर्ने जोस हुन्छ र आज उनीहरु यो टीकालाई बिद्रोह समेत भनिरहेका छन्। खैर जे होस्, त्यो उनीहरुको कुरा हो।
तर, यसमा २ वटा कुरा देखिन्छ। कि त उनीहरुलाई यो भाईटिकाको महत्व थाहा छैन, कि ‘प्रचारफोबिया’ले छोएको छ। नत्र परापुर्वकालदेखि चलिआएको दिदिभाई दाजुबहिनीलाई जोड्ने चाडलाई बिद्रोह वा क्रान्तिकारीपन देखाउनु आवश्यक छैन जस्तो लाग्छ। र यस्तो बिद्रोहले संस्कार मर्छ परिस्कृत हुने कुरा निकै परको कुरा हो।
पुनः सबै चाड मनाउने तरिकालाई सबै चेलीलाई सम्मान गर्दै, समानताको अभियानलाई सदैब साथ दिदै छोरा–छोरी बराबर हो भन्दै, बिद्रोही अभियन्ताहरुलाई प्रश्न, के तपाइको बिद्रोहले आउदो पुस्ताले संस्कृति सिक्न सक्छन त?
भाईटीकामा उमेर पुगेको दाजु लिन यमदुत आउदाँ बहिनिले दाजुको पुजा गर्दैछु, सकेर लैजानु भनेर पर्खाएको र दाजु–बहिनीको प्रेम मन परेर त्यसै छाडेर यमराज गएको कथन छ। दिदिबहिनीले दाजुभाईलाई मृत्युबाट बचाउँछन भन्ने यहि लोकबिश्वासको जगमा अडिएको छ भाईटिका। त्यसैले हिन्दु धर्म मान्ने दाजुभाईहरु चेलीको हातबाट भाईटिका थाप्छन्।
दाजुभाई नभएको आधारमा दिदीबहिनीले एकअर्कालाई टिको लगाउँदैमा यो बिद्रोह हुदैन। यो त साच्चैँ भन्नुपर्दा संस्कृतिमाथिको प्रहार हो। हो संस्कारमा केहि कुरीति छन् भने परिस्कृत गर्नुपर्छ तर संस्कार मासिनेगरी प्रहार गर्नु हुदैन।
तिहारकै कुरा गरौँ तपाईको घरमा कुकुर छैन तर सुगुँर पाल्नुभएको छ भने के तपाई सुगुँरको पुजा गर्नुहुन्छ? कि बाटोमा भेटिएको वा कसैको घरको कुकुर एकैछिन पुजा गर्नुहुन्छ? मलाई पशु र मान्छेलाई दाँजिदैन भन्नुहोला, हो दाँजिदैन तर यो संस्कृति हो।
बाबुको मुख हेर्ने दिन बाबु नहुदाँ बाबुको तस्बिर वा बाबु समानका काकाहरुको पुजा गरिन्छ। समानता भन्दैमा त्यसदिन आमाको पुजा गरिदैँन। त्यसको लागि आमाको मुख हेर्ने औँशी छ। तिजमा आफ्नो चेली नहुँदा कोख नमिलेपनि चेली पर्नेहरुलाई बोलाएर मनाउने गरिन्छ, दाजुभाईसँग मनाईदैन।
हो, हामि सधै नारि–पुरुषमा समानता चाहन्छौँ, संस्कृतिको जगेर्ना गर्छौ तर १३ दिने कर्म गर्दा गर्नुपर्ने गौ–दानका लागि यदि गाई घरमा छैन् भने कतैबाट किनेर ल्याएर गौ–दान गर्ने परम्परा छ। अर्काको गाई दान गर्दिन भनेर घरको हलगोरु दान गर्ने गरिएको छैन।
के हामी घरमा गाई नहुँदा, गोरुको गहुँतले कर्मसिद्धि हुन्छौँ? आफ्नै आमाको कोखबाट जन्मिएकाहरुलाई मात्र दाजुभाई मानिदैन। यहाँ चेली नभएका धेरै छन्, जो ठुलो छाती बनाएर कोख भन्दा परकालाई पनि चेली मानेर टिका ग्रहण गर्छन।
अन्त्यमा, अभियन्ताहरु तपाइको चाड तपाईको मर्जी तर तपाइको बिद्रोहले संस्कृति नमरोस। पुस्तान्तरणमा समेत चलिआएको राम्रो संस्कार संस्कृतिले निरन्तरता पाओस।
सबैले सबै चाडहरु राम्रोसगँ मनाउनुभयो होला। हिन्दुहरुको अर्को पवित्र चाड छठको शुभकामना।सबैका आफ्नो आफ्नो खोला हुदैनन बिद्रोही क्रान्तिकारीहरु तराईमा छठ मनाउदैँ हुनुहुन्छ भने आफ्नो खोला छैन भनेर घरमा ठुलो बाटा वा बाल्टिनमा पानी भरेर छठ पुजा नगर्नुहोला।